I-TemplateShock, ngaphezulu kwama-600 eetemplate zasimahla ezihlelekileyo zeengcali kunye neenkampani | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-TemplateShock, ngaphezulu kwama-600 eetemplate zasimahla ezihlelekileyo zeengcali kunye neenkampani
UYesu Arjona Montalvo | | Idizayini yeMifanekiso, Umzekeliso, Photoshop
ItemplateShock, yiwebhusayithi equlathe ngaphezu kwe- Iitemplate zoyilo zasimahla ezingama-600 zazo zonke iintlobo, zombini iinkampani, iingcali kunye nabalandeli kuyilo lwegraphic. Eli phepha lizisa iitemplate ihlelwe ngokupheleleyo, kwaye le ngqokelela izisa oku kulandelayo: Qalisa kwakhona, Iitemplate ze I-Triptychs, Iitemplate ze IInvoyisiAmakhadi e Tyelela, Iitemplate ze ILogos, Iitemplate ze Iileta, Iitemplate ze Iiposter, Iitemplate ze Imenyu, kunye nezinye ezininzi.
1 Qalisa kwakhona iitemplate
2 Iitemplate ezintathu
3 Izikhokelo ze-invoyisi
4 Amakhadi oshishino
5 Iimpawu ze logo
6 Izikhokelo zeeleta
7 Izikhokelo zeFlyer
8 Izikhokelo zeMenyu
9 Izikhokelo zeFolda
10 Iimpawu zePosta
11 Amakhadi oshishino
12 Iitemplate zesindululo
Qalisa kwakhona iitemplate
Le phakheji enkulu iqulethe ngaphezu kwe-30 templates ze-CV Ukulungele ukukhuphela, zonke zibandakanya iifonti kwiifomathi eziqhelekileyo. Ziyindlela elungileyo yokubonisa izakhono zakho, ulwazi kunye namava. Faka iifayile zomthombo ukuze ukwazi ukuziguqula ngokulula I-Photoshop, i-Illustrator okanye i-InDesign.
Ezi Iitemplate zencwadana yasimahla Bakunika uluhlu olubanzi loyilo oluza kubonisa ulwazi olukhawulezileyo malunga neshishini lakho, umsitho, iprojekthi okanye ukuhambisa nje nawuphi na umyalezo ocinga ukuba ubalulekile. Kuba la maxwebhu anokuphinda asongwe, indawo efanelekileyo, kwaye ngaphandle kwexesha, unokunika abafundi umbono olungileyo wento ozama ukunxibelelana nayo. Khetha ngaphezulu Uyilo olwahlukileyo ezingama-30, Zonke ziyahlelwa ngaphakathi I-Photoshop, i-Illustrator kunye ne-InDesign.
Nokuba sele ugqibile ukusebenzela abathengi bakho, kubalulekile ukugcina umfanekiso olungileyo kude kube ngumzuzu wokugqibela ukuqinisekisa ukuba bayabuya, kwaye bade bacebise nabanye ukuba basebenze kunye nawe. Ke ubashiya a i-invoyisi enomtsalane ijongeka intle kumthengi. Zonke ziyahlelwa ngaphakathi I-Photoshop, i-Illustrator kunye ne-InDesign.
Las makhadi o shishino inokuba yeyona ndlela ilungileyo yokwazisa abathengi abanokubakho kwinkampani yakho, kwaye ube nefuthe elihle kubo, yiyo loo nto benze le pack inkulu ngaphezu kweetemplate ezingama-100 Amakhadi oshishino, alungele ukusetyenziswa kunye nokuziqhelanisa nokuthanda kwakho, zonke ziyahlelwa ngokupheleleyo kwiifomathi ezahlukeneyo ezi-3: I-Adobe Photoshop, iAdobe Illustrator kunye ne-InDesign.
Iimpawu ze logo
El logo Ishishini lelinye lawona macandelo abalulekileyo ukubonisa umfanekiso wakho, obonakaliswa ngokuthe ngqo kumaqabane akho okanye kubathengi bexesha elizayo. Ukwenza izinto zibalasele ngakumbi, yeyona nto yokuqala ibonwa ngabantu xa bengena kwiwebhu, kwaye kunyanzelekile ukuba kuhlangulwe kwasekuqaleni. Ungakhathazeki Iimpawu zelogo zasimahla izokunceda ukufezekisa oko. Olu dibaniso ngaphezulu kwe-100 logo yeetemplate Ziza kuhlelwa ngokupheleleyo (i-PSD), i-InDesign (INDD) kunye ne-Illustrator (AI), Zonke zisimahla ukukhuphela kwaye zilungele ukuprinta.
Ezi iitemplate zeleta simahla, iya kukuvumela ukuba unxibelelane ngokufanelekileyo kulo naluphi na uhlobo lweemeko. Ukuba ufuna ukuthumela ulwazi olubalulekileyo lweshishini komnye wabahlobo bakho, okanye kwelinye lamalungu osapho lwakho afuna umyalezo onobubele, olula, unokuthembela nakweyiphi na kwezi tempile ukubonisa imiyalezo yakho. Njengesiqhelo kwiTemplateShock, beza neefayile zabo iifayile zekhowudi efanelekileyo ke unokwenza olo hlengahlengiso lokugqibela ngaphambi kokuziswa.
Iiflaya zi indlela entle yokuhlanganisa ulwazi olufutshane. Banokuba sisixhobo esisebenzayo sokukhuthaza imicimbi yakho, iimveliso, njl. Kungenxa yoko le nto ingqokelela iqulethe ngaphezulu kwe- Iitemplate ezingama-30 zilungele ukukhutshelwaZonke ziza kuhlela ngokupheleleyo ii-PSD, i-AI kunye neefayile ze-InDesign ukuze uzilungise ngendlela othanda ngayo, iifonti zibekiwe kwaye zibizwa ngendlela efanelekileyo.
Yenza amava amnandi kubathengi kwasekuqaleni kunye nenye yezi itemplate yemenyu yasimahla. Babandakanya ububanzi imibala eyahlukeneyo, uyilo kunye nee icon Baqinisekile ukubamba ingqalelo yabo beza kutya. Ewe kunjalo, zonke zibandakanya iifayile zemithombo yolwazi ukuze ukongeze ukugqibezela kwinkangeleko yakho ukuze uhambelane neshishini lakho, kwaye ubhale zonke iiresiphi, iziselo kunye needessert.
Khusela iziqwenga eziprintiweyo zolwazi lwakho kwiifolda, kwaye usebenzise ukubonakala kwesiko okuhambelana neprojekthi yakho okanye inkampani kunye nayo nayiphi na kwezi template zasimahla kwifolda. Ilungele iincwadana, iinkampani nokunye okuninzi. Into nganye ibonelelwa ngeefayile zomthombo wayo ukuze uyihlele kwaye uqiniseke ukuba iifolda zimele iinjongo kunye nesitayile sakho ngendlela oyifunayo.
Umqondiso obekwe kakuhle kwisitrato esixakekileyo okanye kwisakhiwo unokutsala amakhulu abantu. Ezi Iifowuni zeeposta zamahhala banokuba ngabahlobo bakho abasenyongweni xa uyila umfanekiso weshishini lakho elizayo okanye umcimbi. Faka iifayile zoqobo ukuze zikuncede uzimise ngendlela othanda ngayo. Ungaziguqula ezi templates, imibala yazo eyahlukeneyo, izimbo kunye neemilo, njengoko zingena kwiifom zePSD, AI, kunye ne-InDesign.
Las makhadi o shishino inokuba yeyona ndlela ilungileyo yokwazisa abathengi abanokubakho kwinkampani yakho kwaye ube nefuthe elihle kubo, yiyo loo nto sinayo le pack inezinto ezingaphezulu Iikhompyuter zekhadi loshishino ezili-100, ilungele ukusebenzisa kunye nokuziqhelanisa nokuthanda kwakho, zonke iitemplate zihleleke ngokupheleleyo kwi Iifomathi ezi-3 ezahlukeneyoI-Adobe Photoshop, i-Adobe Illustrator kunye ne-InDesign.
Ukuba uneprojekthi entsha eyoyikekayo, kodwa ungenazo izixhobo okanye amaqabane okwenza ukuba yenzeke, ezi templates zikulungele ukubonisa umntu into ofuna ukuyenza, nokuyifumana. Ngaba Iitemplate ezingama-30 kwiifomathi zePSD, AI kunye ne-InDesign.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-TemplateShock, ngaphezulu kwama-600 eetemplate zasimahla ezihlelekileyo zeengcali kunye neenkampani
Cv uMyili wobugcisa-cv.com/generator/?l=fr
UAndres Rivera sitsho
Molo, iitemplate azindivumeli ukuba ndizikhuphele kugoogle +, andifumani kwanto kwiphepha kuba oku kunokwenzeka
Phendula uAndres Rivera
I-WIX ikuvumela ukuba wenze iwebhusayithi yakho ngokulula kwaye simahla
Umzobo omkhulu eFlorence ofihla amagumbi ahlukeneyo